ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भनेपछि पत्रकार संग पर्यो चर्काचर्की, रामकुमारी झाँक्रीको झाँको झारे (भिडियोसहित) – Nepali Taja Khabar
सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धेरैले राजाबादी भन्ने आरोप लगाउँदै आईरहेका छन् । यद्यपी उनले भने यो केवल आरोपकालागी आरोप मात्र भएको बताउँदै आफु राजाबादी नभएको बताएका छन् ।
उनले एक अन्तरवार्तामा प्रश्नकर्ताले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै आफु राजाबादी नभएको बताएका हुन् । ‘मैले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाएको देख्नु भएको छ ? मैले कहिल्यै राजा नै चाहिन्छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ ?’ शाहीले भने ।
शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलोचना गर्न पछि परेनन् । उनले यो देशमा ओली प्रधानमन्त्री भएर के गरे भन्ने प्रश्न गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री ओली भएर देश र जनताकोलागी के भएको छ ? शेर बहादुर प्रधानमन्त्री भएर के भयो ? प्रचण्डको त कुरै नगरौं ।
यो देश अहिले केवल ओलीमय र प्रचण्डमय बनेको छ ।’ शाहीले योभन्दा अगाडी पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै आईरहेका थिए । उनले वर्तमानदेखि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतले यो देशकोलागी केही नगरेको बताए ।
बोल्ड अवतारमा देखिन थालिन वर्षा शिवाकोटी (हेर्नुहोस् तस्विरहरु)
श्रीमानले पनि छोडे ८ बर्षे छोरालाई क्यान्सर लाग्यो, र;गत किन्ने पैसा पनि नभएपछि (भिडियो सहित)